Paartiin KFO Labsii Yeroo Muddamaa irratti mootummaa himachuufi - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright FACEBOOK/OFC
Akkaataa Labsiin Yeroo Muddamaa mana maree bakka bu'oota uummataatiin itti ragga'e irratti paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo mootummaa irratti himannaa banuufi.
Paartichi walgahii koree hojii raawwachiiftuu guyyoota lamaaf taa'een booda ibsa baaseen, Labsii Yeroo Muddamaa bifa wal falmisiisaa ta'een mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaan raggaasifame akka hin fudhanne beeksisee jira.
"Akkaataan labsichi itti labsames ta'e, itti ragga'e heera mootummaa biyyattii kan cabsuu fi seeraan kan himachiisudha. Nuyi ammallee biyyi kun seeraan bulti jennee waan amannuuf abukaatoo dhaabnee mana murtiitti himachuuf waliigalleerra," jechuun dura taa'aa Itti aanaan paartichaa Obbo Baqqalaa Garbaa BBC'tti himanii jiru.
Sagaleen deeggarsaa kenname kan afa-yaa'ii mana mareetiin ibsame 346 ta'ee osoo jiru, erga walgahiin xumuramee booda 2/3ffaa akka hin guutne gaafa baran gara 395 ol guddisuu, miseensi mana maree tokko harka lama baasuufi miseensota mana marichaa labsicha morman bifa doorsisuun garagalanii ilaaluun, labsichi osoo hin darbiin akka darbu taasifame jedhu Obbo Baqqalaan.
Labsicha mormuu fi mana murtiitti himachuun alatti, ummanni karaa nagaa fi seera qabeessa ta'een mormii isaa akka itti fufu paartichi waamicha dhiheessee jira.
Sababa labsii kanaatiin seera cabuufi miidhaa lammiilee irra gahuuf itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa biyya bulchaa jiru ta'uus paartichi beeksisee jira.
Labsii Yeroo Muddamaa mana mareetiin raggaasifame